Lionel Messi oo barbareyn doona Cristiano Ronaldo haddii uu ku guuleyso abaal-marinta… – Gool FM
(Barcelona) 06 Maajo 2017 – Weeraryahanka kooxda kubadda Barcelona ee Lionel Messi waxa uu qarka u saran yahay inuu barbareeyo rikoodh uu horay ugu dhigay qaaradda Yurub laacibka ay xafiiltamaan ee Cristiano Ronaldo.
Xiddiga reer Agentina waxa uu ku sii dhowanaanayaa inuu ku guuleysay abaal-marinta Kobta dahabka ah ee gooldhalinta qaaradda Yurub markiisii afaraad, maadaama uu yahay hoggaamiyaha ugu sarreeya ee taranka loogu jiro abaal-marintaas.
Haddii uu Messi ku guuleysto abaal-marinata Kobta dahabka ah ee Yurub waxa uu barbareyn doonaa Cristiano Ronaldo oo abaal-marintan markiisii afaraad horay ugu guuleystay sanadkii 2015-kii.
Ronaldo markii ugu horreysay waxa uu abaal-marintan ku guuleystay waxa ay ahayd xilli ciyaareedkii 2007/2008 markaasoo uu ka tirsanaa Man United, sidoo kalena 2010-2011, 2014-2015 ayuu si kalinimo ah u qaaday isagoo ku sugan Real Madrid, halka 2013/2014 uu abaal-marintan la wadaagay Luis Suarez oo markaas ku sugnaa kooxda Liverpool.
Dhinaca kale Lionel Messi oo isna saddex jeer ku guuleystay abaal-marintan xilli ciyaareedyadii 2009-10, 2011-12 iyo 2012-13 ayaa hadda qarka u saran inuu markiisii afaraad hanto, haddii uu qaado abaal-marinta xilli ciyaareedkan waxa uu barbareyn doonaa Ronaldo.
Lionel Messi ayaa dhaliyey 33 gool, waxaana xiddiga ku xiga ee ay isku kooxda yihiin ee Suarez uu ka sarreeyaa 8-gool marka la eego La Liga, halka uu Ronaldo ka sarreeyo 13 gool, waxaana uu Cr7 leeyahay 20 gool.
Geesta kale Wiilka joogga dheer ee kooxda Real Madrid Ronaldo ayaa isaguna qarka u saran inuu gooldhalinta Champions League ku garaaco Lionel Messi, maadaama uu 1 gool sarreeyo Messi oo laga reebay tartankan, kaasoo leh 11 gool, halka xiddiga Real Madrid oo heli karo labo kulan oo kale koobka horyaallada Yurub uu leeyahay 10 gool.
Real Madrid oo shiiska saaratay Hector Bellarin